.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Jet Audio Player and Converter Portable
Jet Audio Player and Converter Portable
ဒီနေ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် jetaudio player portable လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
player တွေထဲမှာမှ အဲဒီ player လေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျဖြစ်တယ်။
သူက Playerတင်မကပဲ converter လေးအဖြစ်ပါသုံးလို့ရတာပါ။နောက်ပြီး
video ကို mp3အဖြစ်ပြောင်းလို့လဲရပါတယ်။နောက် AVI,WMV,MP4 လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်။
နောက်ပြီး သီချင်း size ချုံ့တဲ့နေရာမှာလည်း size မျိုးစုံမိမိစိတ်ကြိုက် ချုံ့လို့ရပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ 40 kbps အထိချုံ့တာတောင်မသီချင်းရဲ့Qualityကအရမ်းကြီးကျမသွားပဲနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။
flashsong ၀ါသနာရှင်တွေအကြိုက်တွေ့မှာပါ။ :)
အခုနောက်ပိုင်း flashsong လုပ်ရင်အဲဒါလေးပဲသုံးပြီး သီချင်းsize ချုံ့ဖြစ်တယ်။
software လေး ကိုတော့အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါနော် 21mbတော့ရှိပါတယ်။
Download >>> jet audio portable
အသုံးပြုနည်းလေးကိုအောက်မှာ ပုံလေးတွေနှင့်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ ပုံထဲကမျှားပြထားတဲ့ convert audio ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
နောက် add file ကိုနှိပ်ပြီး သီချင်း(mp3)ထည့်ပါ။
ပြီးရင် ပြောင်းမည့် format mp3ကိုရွေးပေးပါ။
config ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီး 40 kbps ရွေးလိုက်ပါ။ အသံ Qualityအရမ်းကျနေတယ်ဆိုရင်တော့ 48 kbpsကိုရွေးပါ။
ပြီးရင် မိမိ သိမ့်မယ့်သီချင်းကိုပြန်ရှာရလွယ်အောင် ထားမယ့်နေရာကိုရွေးပေးပါ။
ပြီးရင် start ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရပါပြီ။
Posted by FlashSongCrazy at 03:15